Mubvunzo: Ucharonga B Kukanganisa Kutenderera Kwako - BikeHike
Inguva yakadii Plan B inoparadza kutenderera kwako?
Mangwanani anotevera mapiritsi anogona kukanganisa kutenderera kwako kwemwedzi here?
Unogona kuwana kechipiri nguva mushure mekutora Plan B?
Ko Plan B inoshandura ovulation yako here?
Hurongwa B hungakundikana here?
Mangwanani epiritsi anogona kukanganisa nguva yako mwedzi miviri gare gare?
Unogona here kuita miscarriage mushure mekutora Plan B?
Ndinoziva sei kana ini ndiri ovulating?
Ndezvipi zviratidzo zve ovulation?
Ndinoziva sei kana ndiri ovulation?
Pane munhu akaita pamuviri mushure mekutora Plan B?
Piritsi remangwanani rinoshanda here kana akapinda mukati mako?
Kutora Plan B kunobata mwana wako here?
Plan B inokuvadza kana watova nepamuviri here?
Ko Plan B inogona kukupa bvunzo dzemimba?
Ndezvipi zviratidzo zvekuzvitakura muvhiki yekutanga?
Ungaziva sei kana yako yakaorera kumba?
Iwe unogona kutora pamuviri kana iwe usina ovulating?
Ndinoziva sei kana ndisina ovulation?
Mazuva mangani iwe usati wabata ovulation?
Levonorgestrel inowanikwa mumapiritsi ekudzivirira kubata pamuviri, asi Chirongwa B chine muyero wepamusoro unogona kushandura huwandu hwemahomoni emuviri wako. Mahomoni ekuwedzera anogona, zvakare, kukanganisa kutenderera kwekuenda kumwedzi, zvichiita kuti nguva isati yasvika kana kuti inonoke pamwe nekunyanya kubuda ropa.
Kuchinja kwakawanda kunokonzerwa nemishonga yekudzivirira pamuviri yechimbichimbi sePlan B hairambe ichipfuura nguva imwe chete yekuenda kumwedzi. Kana nguva yako yapera kwevhiki mushure mekunge watora Plan B, pane mukana wekuti iwe unogona kuva nepamuviri, saka funga kutora pamuviri bvunzo.
Kutora Plan B (inonziwo emergency contraception, kana kuti morning-after pill) kunogona kushandura nguva yekutevera kwemumwe munhu, saka nguva yemusikana wako ingangove yakasiyana kweinenge mwedzi. Hapana chinokuvadza kana chine njodzi pakushandisa mangwanani-eshure kwepiritsi kakawanda sezvinodiwa.
Kumwe kubuda ropa kusingaite - kunozivikanwawo sekuona - kunogona kuitika mushure mekutora mapiritsi emangwanani. Kuwana nguva yako mushure mekutora dambudziko rekudzivirira pamuviri (EC) chiratidzo chokuti hauna pamuviri. Zvakajairikawo kuti nguva yako iwedzere kurema kana kureruka, kana kutanga kana kuti gare gare kupfuura zvakajairika mushure mekutora EC.
Zvinoenderana neiyo chigadzirwa label, Chirongwa B chinodzivirira kana kunonoka kubuda, kana kuburitswa kwezai. Inogonawo kudzivirira kusangana, kana zai nembeu zvasangana.
Rimwe-dose rekudzivirira pamuviri mapiritsi rinodzivirira kubata pamuviri pamusoro pe50-100% yenguva. Zvimwe zvikonzero zvekukurumidzira mapiritsi ekudzivirira pamuviri anogona kukundikana zvinosanganisira ovulation nguva, BMI uye kusangana kwezvinodhaka.
“Morning after pill inogona kunonoka kuenda kumwedzi kwako asi hazviwanzodaro. Nguva yako inotevera inogona kutokurumidza kutanga,” anodaro Julia, “Zvisinei, kana nguva yako yokutevera yakanonoka nemazuva anodarika manomwe, unofanira kuongorora kuti une pamuviri.”
Plan B haigoni kukonzera mimba kana kukukuvadza kana watova nepamuviri. Kana USASINA kubuda ropa mukati memavhiki matatu mushure mekutora Chirongwa B, fonera Health Center panhamba 3-685 kuti uwane nguva yekusangana.
kureba kwekuenda kwako kumwedzi - ovulation inowanzoitika kutenderedza mazuva gumi kusvika gumi nematanhatu nguva yako isati yatanga, saka unogona kuzoshanda paunenge uchizadza kana uine nguva yekutenderera. yako yemukati mucus - iwe unogona kuona yakanyorova, yakajeka uye yakawanda inotsvedza mamasi panguva yekutenderera.
Zviratidzo zveOvulation Mhedzisiro Yakanaka paOvulation Test. Fertile Cervical Mucus. Kuwedzera Kushuva DzeBonde. Basal Body Temperature Kuwedzera. Shanduko muCervical Position. Kunyorova Kwezamu. Mate Ferning Pattern. Ovulation Pain.
Zviratidzo zveOvulation Kukwira mu tembiricha yemuviri, kazhinji 1/2 kusvika 1 dhigirii, kuyerwa nethermometer. Mazinga epamusoro e luteinizing hormone (LH), akayerwa pakiti yekuzarisa yemba. Cervical mucus, kana vaginal discharge, inogona kuoneka yakajeka, yakatetepa, uye yakatambanudzwa, senge mazai machena ezai. Kunyorova kwezamu. Bvunza.
Inofungidzirwa kuti 0.6 kusvika 2.6% yevakadzi vanotora mangwanani-mushure mepiritsi mushure mekuita zvepabonde zvisina kudzivirirwa vachave vaine pamuviri. Zvinozivikanwa nevanhu - nezvavasingazive - nezvepiritsi remangwanani zvave kuonekwa mushure mekunge munyori weRefinery29 ataura nyaya yake yekuve nepamuviri zvisinei nekunwa nzira dzekudzivirira nadzo pamuviri.
hongu zvicharamba zvichishanda. Ruzhinji rwetsvagiridzo inoratidza kuti kushandisa Plan B hakukonzeri chero shanduko mumucheka wechibereko (endometrium). Kwete - kudzivirira pamuviri kwechimbichimbi (aka the morning-after pill) kunogona kubatsira kudzivirira kubata pamuviri mushure mekuita zvepabonde zvisina kudzivirirwa, kwete kare.
Chirongwa B hachizokuvadza mwana ari kukura. Kana Plan B ikatorwa zvisizvo panguva yekuzvitakura, hazvikuvadzi mwana ari kukura. Kushandisa Plan B hakuzokanganise kugona kwemukadzi kuita mimba mune ramangwana. Madzimai anogona kuchengeta mapiritsi kumba kana paita emergency.
Plan B ipiritsi rekudzivirira kubata pamuviri, zvichireva kuti inodzivirira kubata pamuviri. Kana watova nepamuviri, piritsi racho harishande. Mushonga uyu "hauzokanganisa kana kukanganisa nhumbu iripo," maererano naTeva.
Plan B inzira yekudzivirira pamuviri yechimbichimbi, uye inofanira kutorwa mukati memaawa makumi manomwe nemaviri ekubvira kubata pamuviri. Hazvizokanganise mhedzisiro yebvunzo yako yekuzvitakura. Nekuti bvunzo dzepamuviri hadzina chokwadi maawa makumi manomwe nemaviri mushure mekubata pamuviri, Chirongwa B hachipindire.
Zviratidzo zvepamuviri muvhiki 1 kusvotwa kana pasina kurutsa. mazamu anochinja anosanganisira kupfava, kuzvimba, kana kunzwa kurira, kana tsinga dzebhuruu dzinoonekwa. kuita weti kakawanda. musoro. yakasimudza basal tembiricha yemuviri. kuzvimba mudumbu kana gasi. kunyorova pelvic cramping kana kusagadzikana pasina kubuda ropa. kuneta kana kuneta.
Yakawanda yekumba FSH bvunzo dzakanyanya kufanana nebvunzo dzemimba dzinoitwa kumba. Kuti uedze zviri nyore, shandisa kapu diki kuunganidza weti kubva pakutanga weti yezuva. Wonyika kamuti kekuyedza mumuenzaniso weweti woisa panzvimbo yakati sandara apo mhinduro inonyoresa.
Iwe unogona kubata pamuviri kana ukaita zvepabonde zvisina kudzivirirwa chero kupi zvako kubva pamazuva mashanu isati yasvika kusvika 5 zuva mushure mekuvhara. Iwe haugone kubata pamuviri kana usina ovulation nekuti hakuna zai rekuti urume hubatane. Kana uchinge waenda kumwedzi usina ovulation, inonzi anovulatory cycle.
Chiratidzo chikuru chekushaya mbereko kutadza kubata pamuviri. Kuenda kumwedzi kwakarebesa (mazuva makumi matatu nemashanu kana kupfuura), kupfupika kwazvo (pasi pemazuva makumi maviri nerimwe), kusarongeka kana kusavapo kunogona kureva kuti hausi kuzara.
Kubata pamuviri kunogoneka chete kana ukaita bonde mukati memazuva mashanu ovulation isati yasvika kana pazuva rekuvhiya. Asi mazuva akanyanya kuorera ndiwo mazuva matatu anotungamira uye anosanganisira ovulation. Kuita bonde panguva iyi kunokupa mukana wakanyanya wekubata pamuviri.
Mhinduro Yekukurumidza: Unogona Kuronga B Mess Nekutenderera Kwangu
Ko Plan B Inokanganisa Kuenda Kumwedzi Kwako
Mhinduro Yekukurumidza: Inoronga B Pill Mess Up Cycle
Mhinduro Yekukurumidza: Inogona Kuronga B Mess Up Period Cycle
Unogona Kuronga B Mess Nekutenderera Kwako
Mhinduro Yekukurumidza: Inogona Kuronga B Kukanganisa Nguva Yangu Yekutenderera
Inogona Kuronga B Kukanganisa Yako Inotevera Cycle
Mubvunzo: Ko Plan B yakakanganisa Kuenda Kumwedzi Kwako
Mubvunzo: Kuronga B kunokanganisa Kutenderera Kwenguva Yakadii
Mubvunzo: Inogona Kuronga B Kukanganisa Kuenda Kwako Kumwedzi
Mhinduro Yekukurumidza: Unogona Kuronga B Mess Nenguva Yako Yekutenderera